समृद्ध मानिसको पैसा उसलाई बचाउन सकेन। पैसा स्वर्ग तपाईं सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ। के तपाईं मुक्ति किन्न सक्दैन। यो असम्भव छ।
लूका 16:19 त्यहाँ बैजनी र मलमलको ढाकिएको र आनन्द र उत्सव हरेक दिन बस्ने थियो एक धनी मानिस थियो।
धनी मानिस एक स्वतन्त्रित जीवन बस्थे। उहाँले प्रत्यक्ष आज धेरै मानिसहरू बस्थे।
तिनीहरूले एकछिन बस्न र त्यहाँ कुनै पनि समय नडाकीकन पस्नु सक्नुहुन्छ मा सदाको छ कि लाग्छ छैन।
आनन्द र उत्सव मा
मानिस दुखी थियो। उहाँले "आनन्द" र "पार्टी" हरेक दिन बसे। परमेश्वर र येशू बिना जीवन हिंड्न मानिसहरूलाई दुखी र दुःखी हुन छैन।
तिनीहरूले आनन्द प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो जीवन भोज हुन सक्छ। आनन्द र जीवनको सदाको सहमत छैन फरक कुरा हो। तर तिनीहरूले क्षण खुसी छ भन्ने महसुस हुन सक्छ।
तर आनन्द उद्देश्य छ। यस सम्झौता मा। उद्देश्य तपाईं निराशा नष्ट रही देखि सुरक्षित गर्न आवश्यक छ।
के तपाईं येशू आवश्यक किन कारण येशूले बिना तपाईं irretrievably अनन्त नरक गुमाए छन् भन्ने छ।
के तपाईं मुक्ति किन्न सक्दैन
न त तपाईं येशू धनी हुन आवश्यक छैन। धनी मानिस पहिले नै धनी थियो। के तपाईं येशू सुरक्षित गर्न आवश्यक छ।
धनी मानिसको पैसा उसलाई बचाउन सकेन। पैसा स्वर्ग तपाईं सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ। के तपाईं मुक्ति किन्न सक्दैन। यो असम्भव छ।
यो तपाईं मर्न र यस संसारमा छोड्न लागि समय जब न त तपाईं आफ्नो पैसा लिन सक्छ।
न त येशूले सङ्गति प्राप्त गर्नुपर्छ। धनी मानिस पहिले नै थियो आफ्नो पार्टीहरूसँग सहभागिता। उहाँले धेरै साथीहरू र परिचितहरू थियो।
होइन, के तपाईं येशू सुरक्षित गर्न आवश्यक छ।
धनी मानिस र लाजरसको येशूको कथा एक दृष्टान्त छैन। यो साँच्चै भयो।
Parables कहिल्यै येशूले नाम, तर यो उल्लेख येशूले लाजरसको नाम। येशूले वास्तविक घटना चित्रण गरिएको छ किनभने यो छ।
बिरामी र बाहिर
यो लाजरस धनी मानिसको गेट मा राख्नु भनेर महत्वपूर्ण छ। उहाँले पनि प्रविष्ट गर्नुभएन। उहाँले प्रतिबन्ध लगाइयो। उहाँले तिनीहरूलाई हौं थिएन। उहाँले बाहिर थियो!
लाजरस sores भरिएको थियो। धनी मानिसलाई विपरीत। उहाँले स्वास्थ्य भरिएको थियो।
उहाँले स्वास्थ्य पूर्ण तापनि उहाँले सुरक्षित र बचत भएन। उहाँले हराएको थियो।
यी दुई poorest साँच्चै दुनियाँमा थिए। किनभने उहाँले अब्राहामको विश्वास थियो पूर्व स्वर्ग, उहाँले धेरै गरिब थियो।
किन तपाईं येशू आवश्यक
तपाईं चाहिन्छ भनेर येशूको उद्देश्य स्वास्थ्य गर्न मुख्यतया छैन। तपाईं सुरक्षित गर्न लागि उद्देश्य बिना छ!
तर कुनै विश्वास गर्ने धनी छैन स्वर्ग तिर धनी छ, र तिनीहरूले पनि छैन जानेछ।
तपाईं पृथ्वीमा यहाँ येशूले स्वीकार
किन यो तपाईं यहाँ यो नश्वर मा येशूले स्वीकार र सुरक्षित हुन महत्त्वपूर्ण छ यो छ। ढिलो भएकोले।
यो पृथ्वीमा के तपाईं येशू स्वीकार र सुरक्षित हुन यहाँ छ। तपाईं मरेपछि, के तपाईं येशू स्वीकार छैन।
तपाईं मरेपछि, तपाईं पछुताउनु र येशूको पश्चात्ताप गर्न को लागि कुनै मौका छ।
यसलाई मर्न समय जब तपाईं थाहा छैन
यो तपाईं मर्न लागि समय जब तपाईं थाहा छैन। त्यसैले, तपाईं त्यहाँ समय हुँदा अब येशूले स्वीकार गर्न आवश्यक छ।
21 उहाँले धनी मानिसको तालिकाबाट गिर के को आफ्नो भरण खान खोजीमा थिए। हो, कुकुर आए र आफ्नो sores licked।
सायद यो कुकुर लाजरस फाइदा लिए पनि त थियो। तिनीहरूले आफ्नो घाउ licked यदि खाना र एक सानो अतिरिक्त "खाना" प्राप्त गरे।
धेरै छैन सोधे
गरिब मानिस निरन्तर भोक थियो। उहाँले खाना को निराशाजनक आवश्यकता थियो। आफ्नो समस्याका उहाँले खाना बारेमा सपना त्यहाँ राख्नु।
तर उहाँले धेरै सोध्न भएन। उहाँले प्रशस्त मात्रामा धनी गंदा frill गर्दा मात्र crumbs रही पछि खोजीमा थिए।
त्यसैले यसलाई परमेश्वरको बच्चाहरु संग छ। तिनीहरूले धेरै सोध्न छैन। तिनीहरूले के संग खुसी छन्। तर गरिब मानिस त्यहाँ पनि उहाँले छन् गर्नुपर्छ रूपमा भएको थियो।
गरिब र बिरामी
उहाँले doorway, गरिब बिरामी र दयनीय र भित्र टेबल मा खाना को सपना देख्यो त्यहाँ राख्नु।
होइन, त्यो टेबल मा खाना बारेमा सपना थिएन, तालिका अन्तर्गत crumbs को तर। तर पनि उहाँले थियो यी crumbs नै रोक्न।
गरिब चिकित्सा ध्यान आवश्यक छ, तर सबै उहाँले प्राप्त हेरविचार कुकुर आफ्नो sores licked थियो।
गेट बाहिर उपयोग
कुकुर तपाईं इस्राएलका कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कम बीच थियो, तर यो गरिब संग समाजमूलक यी थियो।
दुवै कुकुर र गरिब गेट बाहिर थिए।
भगवान लाजरस देखे
धनी देख्न गर्नुभयो लाजरस, तर त्यहाँ उसलाई देखे जो एक थियो र यो परमेश्वर थियो।
परमेश्वरले आफ्नो विश्वास र भरोसा देखे। गरिब संसारको धन भर सकेन।
उहाँ स्वर्गमा परमेश्वर भरोसा सक्छ मात्र व्यक्ति। र यो साँचो धन दिन्छ कि यो छ।
लाजरस अब्राहामको विश्वास थियो, र चाँडै उहाँले सुनको सडकमा हिंड्न हुनेछ।
स्वर्गदूतहरू घर अनुरक्षण सुरक्षित
लूका 16:22 त्यसैले गरिब मानिस मृत्यु र अब्राहामसित हुन स्वर्गदूतहरूले गरियो। पनि धनी मानिस पनि मर्यो र गाडियो।
गरिब लाजरसको मृत्यु भयो। तर अचम्मको कुरा भयो। स्वर्गदूतहरू आए र उहाँलाई मिल्यो।
स्वर्गदूतहरू उहाँको अब्राहामसित हुन लगे। उहाँले स्वर्गदूतहरूले escorted थियो!
त्यसपछि यो तपाईं निर्णय गर्न को लागि ढिलो, छ सदाको मा आएको छ। यो तपाईं स्वर्ग वा जाँदैछन् यदि तपाईं निर्णय पृथ्वीमा यहाँ छ।
एक पटक तपाईं मरे, त्यसपछि यो अन्त छ। तपाईं आध्यात्मिक र सचेत अवस्थामा बस्न हुनेछ।
हामी विशेष गरी धनी मानिस र लाजरसको येशूको कथा यो हेर्नुहोस्।
लाजरसको मृत्यु, तर उहाँले अब्राहामलाई स्वर्गदूतहरू लगियो। त्यस स्थान मा एउटा सचेत अस्तित्व थियो।
यस्तै मा जब तपाईं मर्न छ। के तपाईं येशू हौं भने, त्यसपछि स्वर्ग स्वर्गदूतहरूले तपाईं ल्याइनेछ जहाँ येशू हुनुहुन्छ।
र तपाईं येशू संग सचेत अस्तित्व जहाँ बस्नेछन्।
येशूले विश्वास बिना मर्नेहरूलाई तिनीहरू सधैंभरि सचेत अस्तित्व बस्न कहाँ नरक, जानेछन्।
तपाईंले येशूको स्वीकार गर्न र सुरक्षित हुन मौका राखिएको भनेर सधैंभरि थाहा लाग्छ।
यो भयानक हुनुपर्छ।
सधैं येशूले सुरक्षित हुन गर्न छान्नुभएको सम्झना र अस्वीकार गर्न सम्झनुहोस्। यो शायद सबैभन्दा खराब वेदना नरक मा उपलब्ध छैन।
नरक निष्क्रिय छैन
लूका 16:23 उहाँले नरकमा सास्ती थियो उहाँले आफ्नो आँखा उठाएर र उसलाई टाढा बन्द र लाजरसलाई अब्राहाम देखे।
धनी मानिस नरक मा थियो। उहाँले हराएको थियो।
उहाँले एक लक कुनै थप जेल र त्यसपछि थियो भर्खरै थियो।
होइन, नरक छैन निष्क्रिय छ। त्यहाँ कहिल्यै समाप्त भन्ने गतिविधिको hive छ।
उहाँले नरकमा सास्ती थियो। र यो सास्ती चलिरहेको छ। यसलाई कहिल्यै समाप्त हुन्छ।
धनी नरक मा एक सचेत अस्तित्व बस्थे। र उहाँले सम्झनुहुन्छ। आफ्नो दुष्ट जीवन - उहाँले आफ्नो जीवन सम्झन्छन्।
उहाँले नरक मा देख्न सक्थे। उहाँले आफ्नो आँखा उठाएको भन्छन्। नरक भएका ती सचेत अस्तित्व छन्।
नरक बासिन्दाहरूको मान्छे चिन्न। उहाँले लाजरसलाई बुझे। उहाँले थियो थाह थियो। उहाँले यो आफ्नो ढोकामा झूठ गर्न प्रयोग गर्ने उहाँले थियो भनी थाह थियो।
राज्यको बारम्बार उहाँले आफ्नो घर जाने जब लाजरस द्वारा पारित गरेको थियो। उहाँले तिनलाई त्यहाँ झूट देखेका थिए तर उहाँलाई पाऱ्यो थिएनन्।
यो अनौठो कुरा उहाँले पनि अब्राहाम पहिचान थियो। उहाँले उसलाई कहिल्यै देखेको तर तिनी तुरुन्तै गर्ने थाह थियो।
जो नरक जाने ती बुझ्न र थाहा हुनेछ। तिनीहरूले त्यहाँ समाप्त भयो किन आध्यात्मिक समझ र स्पष्टता पाउन हुनेछ।
तिनीहरूले येशूको बारेमा भने थियो साँचो भन्ने थाहा हुनेछ र अतिरिक्त तिनीहरूले त्यहाँ हुन योग्य भनेर थाहा हुनेछ। तिनीहरूले यसलाई अस्वीकार गर्न सक्दैन।
नरक मा प्रार्थना बैठक
त्यहाँ स्वर्ग गर्न खाली बीच हामफाल्नु सकेन paradiset.De प्राप्त गर्न नरक बासिन्दाहरू लागि कुनै मौका थियो। उनीहरू त्यहाँ जान सकेन।
तिनीहरूले अन्य पक्षमा फेरि माथि घाटी मा तल चढ्नु र त्यसपछि सकेन। यदि सबै त्यहाँ कुनै तल थियो यो पनि गहिरो थियो। शायद छैन।
स्वर्गमा गरेको गेट
र तिनीहरूले कुनै तरिका स्वर्गको ढोकाहरू मा आइपुग्दा थियो सबै आशाले विपरीत हो भने, तिनीहरूले बारी बाध्य हुनेछ। तिनीहरूले येशूको रगत शुद्ध छैन किनभने वास्तवमा कहिल्यै मा गरौं थियो।
यो येशूले आफ्ना रगत शुद्ध छ जो प्राप्त गर्ने मात्र ती छ। र येशूको रगतले शुद्ध हुनेहरू स्वर्गमा प्रवेश गर्न सक्छ।
कुनै पृथ्वीमा फिर्ता खोल्दै
फिर्ता नरक देखि पृथ्वीमा कुनै तरिका पनि छ। नरक सडक एकलदिशानिर्देशनात्मक छ।
त्यहाँ फिर्ता कुनै तरिका हो। नरक गएको भएकाहरूलाई सधैं हुनेछ।
धनी मानिस नरकमा प्रार्थना। उहाँले त्यो प्रार्थनाको जवाफ प्राप्त गर्न जाँदै थियो बुझे जब आफूलाई सोधेर रोकिएको छ।
अब उहाँले आफ्नो पाँच भाइ माग्यो। उहाँले तिनीहरूलाई चेतावनी गर्न आफ्ना भाइहरूलाई लाजरस पठाउन अब्राहाम सोध्छन्।
एक unconcerned पापी जीवन
हामी धनी मानिसको भाइहरूले नै तरिकामा धरती मा जीवित उहाँले जस्तै छन् भनेर बुझ्न। समारोह र आनन्द हरेक दिन। एक unconcerned जीवन, एक आउँदै सदाको एक विचार र जहाँ सदाको खर्च गर्न बिना।
तर नरक त्यहाँ प्रार्थना गर्न कुनै जवाफ हो। यो पृथ्वीमा तपाईं सोध्न छ। ढिलो भएकोले।
नरक जाँदैछन् गर्नेहरूलाई
"त्यसैले छैन पनि सास्ती को यो स्थान मा आउँछन्।" नरक वास्तविकता को एक स्थान हो। जहाँ मान्छे आउन सक्नुहुन्छ। र जो प्राप्त ती त्यहाँ मृत्यु पश्चात्ताप नगर्ने ती छन्।
Vecka 20, måndag 17 maj 2021 kl. 18:52